gaabinta : QMUL
aasaasay : 1785
Ha iloobin in aad wada hadlaan Queen Mary University of London
Qorto Queen Mary University of London
Queen Mary University of London waa mid ka mid ah keentay hay'adaha waxbarashada sare cilmi-diiradda ee UK. Iyadoo ku dhawaad 21,187 ardayda, 4,000 shaqaalaha iyo dakhligeeduna sannadkii waa £ 300m, waxaan nahay mid ka mid ah University of London kulliyadaha ugu weyn.
Waxaan baro iyo cilmi ee guud ahaan ballaaran oo kala duwan maadooyinka ee aadanaha, cilmiga bulshada, sharciga, daawada iyo ilkaha, iyo sayniska iyo injineernimada. Iyada oo ku saleysan in meel hal abuur leh iyo dhaqamada kala duwan ee bari London, innaguna waxaynu nahay jaamacadda London oo keliya inay awoodaan inay bixiyaan gabi ahaanba isku dhafan 2,000 sariirood campus degaanka at our guriga Mile End.
Queen Mary ayaa waxay sameeyeen dadaal lagu istiraatiiji ah in tayada sareeya ee cilmi. Waxaan ku maal mabda this by nidaamsan qoranayaan ee tacliinta ugu fiican nidaamo ka adduunka oo dhan. Natiijooyinka qiimaynta ugu dambeeyey qaranka ee cilmi - Research Excellence dhismeedka (REF 2014) - Ayaa xaqiijisay meesheenna in kooxda aad top of jaamacadaha cilmi-hoggaamiyey UK. Guud ahaan, waxaynu ku jirta kaalinta 9aad ee UK ku dhex jaamacadaha multi-awood iyo 5aad ee UK ee boqolkiiba oo ka mid ah 3* iyo 4* saarka cilmi.
Queen Mary waxay ardayda u fiican dhiirrigelin ah, waayo-aragnimo waxbarasho taageero ah oo tayo sare leh, la barayay waxyoonay by cilmi dunida-keentay. Waxaan sidoo kale maal ka badan £ 250m in goobaha cusub ee shan iyo toban sano ee u dambeeyey si ardayda waxay bixiyaan deegaan waxbarasho oo gaar ah. Tani waxay ka muuqataa heerarka noo joogto sare ee qanacsanaanta ardayga. In Survey Ardayda Qaranka ugu dambeeyey (NSS 2015), 88 boqolkiiba undergraduate noo muujiyay "qanacsan guud’ ay waqti halkan, laba iyo toban maadooyinka in saddexda ugu sareeya ee London.
School of Business iyo Maareynta
School of Economics iyo Maaliyadda
School of English iyo Drama
School of Languages, Luuqadaha iyo Film
Studies guulo iyo Latin American
School of Juqraafiga
Xarunta Daraasaadka Sharciga Ganacsiga
School of Relations Politics iyo International
Kulliyadda Daawada iyo Caafimaadka Ilkaha
Barts iyo Dugsiga London ee Daawada iyo Caafimaadka Ilkaha
Machadka Blizard The
Institute of Health Science Waxbarashada
William Harvey Machadka Cilmi-
Wolfson Institute of Medicine hortagga
The Center of Cell ah
Kuliyadda Sayniska iyo Engineering
School of Biological iyo Chemical Sciences
School of Electronic Engineering iyo Sayniska Kombiyuutarka
School of Science Engineering iyo Qalabka
Maadooyinka Research Center ee Biomedical Qalabka
School of Sciences Xisaabeed
School of Physics iyo xiddigaha
Research Center ee Psychology
Queen Mary xidido ku leeyahay ay afar kulliyadaha taariikhi ah: Queen Mary College, Westfield College, Isbitaalka St Bartholomew ee Medical College oo London Hospital Medical College.
The campus Mile End taariikh ahaan waa guriga of Queen Mary College, oo nolosha bilaabay in 1887 sida Palace Shacabka, xarun qabeen ah si ay u bixiyaan London bari waxbarasho, hawlaha dhaqanka iyo bulshada. Queen Mary College la dhigay jaamacadda London ee 1915. Westfield College oo la asaasay 1882 in Hampstead sida kulliyad horseedka waxbarashada sare ee haweenka. In 1989 Queen Mary biirtay Westfield College si ay u sameeyaan Queen Mary iyo Westfield College.
In 1995, Queen Mary iyo Westfield mar kale ku biireen, Wakhtigan la laba kulliyadaha caafimaadka distinguished, Isbitaalka St Bartholomew ee Medical College, established in 1843, iyo London Hospital Medical College, dugsiga caafimaadka England ee ugu horeysay, asaasay 1785. biirto Tani abuuray Barts iyo Dugsiga London The of Medicine iyo Dentistryand keenay waxbaridda caafimaadka iyo ilkaha caafimaad Queen Mary markii ugu horeysay.
In 2013, magaca sharciga ah ee Queen Mary iyo Westfield College, University of London waxaa si rasmi ah isku badali Queen Mary University ee London si ay u muujiyaan isticmaalka caadiga ah. Sanadkan sidoo kale arkay Queen Mary go'aansato in abaalmarinta darajo u gaar ah, la 2014 qalin isagoo ugu horeysay si ay u helaan.
Archives The College ee qaban Xoolo ah archives hay'adaha xiiso iyo daabacayaa dhif, shukaansi ka Century 17aad ilaa maantadan la joogo. Uruurinta ka bixiyaan muuqaal ah galay qaar ka mid ah hawlaha scholarly ka mid ah shaqaalaha QMUL iyo ardayda ee la soo dhaafay, diiwaangalinta taariikhda hodanka ah ee QMUL.
Waxaan leenahay badbaaday qubuuraha labaad ugu da'da weyn Yuhuudda ee England, xabaalo a Spanish Portuguese Yuhuudda shukaansi ka 1726, ee xarunta of our campus.
lafaha reer Yuusuf Merrick, Man Maroodiga, waxaa lagu haynayaa ee School of Medicine iyo Pathology Museum Ilkaha ee.
College Medical ee Isbitaalka Royal London (hadda qayb ka mid ah Barts iyo Dugsiga London ee Daawada iyo Caafimaadka Ilkaha) ahaa dugsiga caafimaadka England ee ugu horeysay markii ay ka furmay 1785.
From 1964 ilaa 1982 Queen Mary College hayo ay nuclear-nuclear u gaar ah, hore amnigeeda Mile End Road dureeri.
Elizabeth Blackwell, dhakhtar ugu horeysay oo aqoon buuxda leh dumar ah ee UK, tababartey Cusbitaalka Barts Medical College ee 1850.
Sir John Vane, kuwaas oo la aasaasay William Harvey Machadka Cilmi-baarista ee, waxaa lagu tiriyaa leh ay ogaadeen sida aspirin iyo daawooyin la mid ah soo saaray saamaynta ay.
Sir Walter Besant ee 1882 novel Dhammaan noocyada iyo Xaaladda Men - Impossible Story An, kuwaad a 'Palace Naciima’ bariga London kula xafladaha muusigga, qolalka reading, galleries sawirka, dugsiga fanka iyo waxbarashada dadka - tani waxay ahayd waxyoonay ee Palace Dadka iyo bilowgii Queen Mary maanta.
Ma rabtaa wada hadlaan Queen Mary University of London ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Queen Mary University of London rasmiga ah Facebook
Queen Mary University ee dib u eegista London
Ku biir si uu ugala hadlo ee Queen Mary University of London.